Xiaomi Smart home будет совместим с HomeKit уже в этом месяце – HienaLouca
I-Xiaomi Smart ekhaya iya kuhambelana ne-HomeKit sele ikhona kule nyanga
Julayi 5, 2018 Dianne Reeves KwiGadi
Kwijeli ezisemthethweni i-YouTube Xiaomi ibonakala ifilimu ekhangayo kakhulu. Ibonisa izicwangciso zekhaya elihlakaniphile i-Xiaomi Aqara, xa idibene kwi-HomeKit. I-Aqara HomeKit ifumaneka e-US kakade kule nyanga.
Iindaba ezimnandi kakhulu kukuba, kulo mgaqo, oko kuphela ibhulorho entsha, esebenza kunye nezincedisi ezikhoyo kwinkqubo smart ekhaya Xiaomi. Izixhobo kunye nesibatho sesibatho ziyaxhunywa nge-protocol yeZigBee. Ukhetho lwezincedisi libanzi kakhulu - kufuneka lobushushu, ukufuma, kuvulwa iingcango neefestile, izikhukula, ukungcangcazela, amaqhosha ukukhanya, nemivalo kunye nabaqhubi. Kwixesha elizayo elizayo, kwaye kuya kubakho iziseko ezilawulwayo.
A inzuzo enkulu naye, ngokufanele Xiaomi, amaxabiso aphantsi lwezincedisi ngamnye, umzekelo, umenzi woluvo lokuvula iifestile zingathengwa sele ngenxa 40 engange, kwaye woluvo ubushushu ibekwa 50 engange. Ezi zixabiso zokhuphiswano.
Le ngcaciso ebalulekileyo - ngoxa i-Aqara iya kufumaneka kuphela kwinguqulelo ye-US kwaye ayikwazanga kakuhle xa inguqulo yeYurophu iza kudayiswa. Okwangoku, kwiintsuku ezimbalwa ezalandelayo, lindele ukuhlolwa kwe-American version.
(Iimbono ezipheleleyo: Ixesha le-572, ukutyelelwa kwe-1 ngosuku)
I-Sonos ibonisa i-Beam kwaye ivakalisa ukufakwa kwe-AirPlay 2
I-beta ye-2 - iOS 11.4.1, i-macOS 10.13.6, i-tvOS i-11.4.1 kunye nokubuya kwe-beta version ye-watchOS
Ukuvuselela i-Apple Shop kwiMedia Markt iWarsaw Okęcie - namhlanje ukuvula
Ukutshintshwa kwe-Apple TV 4 Apple TV 4K - ngaba uyayifanele?
I-Microsoft Surface It malunga ne-iPad - ukhetha ithebhulethi ye-Apple, ikhona i-500 ibhokhwe kwipokoth yakho
Olunye ulwazi malunga neMac entsha, i-iPhone, i-ipad kunye ne-Apple Watchów ye-2018 ngonyaka
Iziphumo ze-Macbook Pro phakathi kwe-2018 kwiimvavanyo ezifanele ukuthenga kunye naziphi ndizikhethele zona
iindabaApple HomeKitHomeKitsmart domikhaya smartSprzętXiaomi
Post Previous:I-Georgia Toffolo kwiingubo ezimhlophe ze-pink. Epaki ye-cinema yaseLinshasa eLondon
Okulandelayo Post:Kwi-intatheli yeShryryakov, amapolisa aseGomel aqokelele ingxelo kwingxelo yesithombe evela eNepal
Emily Atack ‘mortified’ after intimate… (16)
Did Tammy Hembrow hook up with NFL superstar Odell… (5)
"Ukuba ndinguyise wentombi yam, ndamxelela ukuba ndiyamthanda ..." (4)
U-Anthony Burden wazibulala! (4)
UJessica Weaver (uJessica Weaver) kunye nezigidi ze-4.9 ... (4)
Песенник документ о творчестве Эд Ширан в августе в… (4)
Izindebe zomlomo ezingenazo ijoyiki: I-8 yokwenza i-opsy that ... (4)
Рози Уильямс выступает в прямом эфире на (Manchester… (4)
Made In Chelsea’s Jamie Laing and Sophie… (4)